Ciidamada badda Puntand oo gacanta ku dhigay afar doonyood oo kalluumaysi sharci daro ah - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada badda Puntand oo gacanta ku dhigay afar doonyood oo kalluumaysi sharci daro ah
January 5, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ciidamada badda Puntland ee PMPF. [Sawirka: Archive]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamada badda Puntland ee PMPF ayaa maanta oo Khamiis ah gacanta ku dhigay afar doonyood oo kalluumaysi sharci daro ah oo ay leeyihiin kalluumaysato Yemen u dhashay, sida ay wararku sheegayaan.
Ciidamada PMPF ayaa qabtay doonyaha iyo dadkii sarnaa kadib howlgal ka dhan ah kalluumaysiga sharci darada ah oo ay ciidamadu ka sameeyeen xeebaha degmada Eyl ee gobolka Nugaal.
Sida ay sheegayaan ilo-wareedyadu, labo kamid ah nimanka doonyaha saarnaa ayaa dhaawac soo gaaray kadib markii ay rasaas is-weydaarsadeen ciidamada PMPF.
March 26, 2017 Waalidiinta dhibanayaashii lagu dilay duqayn ka dhacday dalka Yemen oo Sucuudiga ka dalbanaya magdhow
September 23, 2017 Ciidanka Badda Puntland oo qabtay dooni hub siday
September 4, 2017 Ciidamada Puntland oo Boosaaso ku qabtay mid kamid ah dadka ka shaqeeya tahriibka
Garoowe-(Puntland Mirror) Duqa kumeelgaarka ah ee magaalada Garoowe Axmed Maxamed Ducaale ayaan u tartameyn doorashada soo socota ee dowladda hoose, sida warsidaha Puntland Mirror ay u xaqiijiyeen ilo-wareedyo isaga ka ag dhow. Duqa ku meelgaarka [...]